Isan-karazany amin'ny iPhone | IPhone News (Pejy 9)
Apple dia namoaka vola ho an'ny iOS izay mampiroborobo ny angovo azo havaozina sy ny fanodinana
Apple dia namoaka sary mihetsika sasany izay mampiroborobo ny angovo madio sy azo havaozina ary ny fanodinana ho an'ny tontolo iainana.
Sony dia hitondra lalao PlayStation amin'ny iOS sy Android
Vaovao tsara ho an'ny mpilalao: Sony dia hitondra lalao PlayStation amin'ny fitaovana iOS sy Android. Hitondra azy ireo any amin'ny tvOS koa ve izany?
Azo alaina ao amin'ny YouTube izao ny lahatsarin'ny keynote farany
Ny keynote farany indrindra izay nanoloran'i Apple ny iPhone SE vaovao sy iPad 9,7-inch iPad Pro dia azo alaina ao amin'ny YouTube.
Ankafizo ireo horonantsary ao amin'ny keynote
Nandritra ny fehezanteny fototra dia afaka nahita horonan-tsary maromaro izahay, ny sasany izay natambatra tamin'ity lahatsoratra ity.
Mety liana amin'ny Imagination Technologies i Apple, saingy lavin'izy ireo ampahibemaso ny fahalianany
Apple dia mividy orinasa mamela azy ireo hanatsara ny vokatra sy ny serivisy. Ny manaraka dia mety ho Imagination Technologies.
Ahoana ny fomba hiverenana amin'ny iOS 9.3 mankany amin'ny iOS 9.2.1 (Downgrade) raha mbola manao sonia ny iOS 9.2.1 i Apple
Apple dia manohy manasonia (mandritra ny fotoana fohy) iOS 9.2.1 aorian'ny famoahana ny iOS 9.3, manampy anao hiverina ianao raha mbola manam-potoana (raha misy ianao).
Manomboka ny hetsika amin'ny 21 martsa: «Andao hivezivezy ianao»
Toy ny mahazatra dia natomboka tamin'ny karazana fanambarana fohy ny hetsika tamin'ny 21 martsa ho ...
Ny lalao Pokémon Go dia azo jerena amin'ny horonan-tsary
Ny lalao Pokémon Go dia naseho tamina horonantsary taorinan'ny fampisehoana iray tao SXSW 2016. Tena misy ve sa sandoka?
Ireo ve no Lightning EarPods izay ho tonga miaraka amin'ny iPhone 7? [Nohavaozina]
Vaovao ratsy ho an'ireo izay te-hanohy hampiasa ny seranan-tsambo 3.5mm ho an'ny headphone: efa tafaporitsaka ny iPhone 7's Lightning EarPods.
Ny tranga multi-asa tsara indrindra tonga lafatra ho an'ny iPhone
Ity tranga ity dia saika manana ny zavatra rehetra mety ilainao amin'ny maha fitaovana anao amin'ny andavanandronao. Ity no "Swiss Army Knife" an'ny sarona.
Teknolojia sy fahasalamana, lafiny roa natokana hihaonana
Manova zavatra maro eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny teknolojia, fantaro miaraka aminay ny hoavin'ny ho avy noho ny fitaovantsika.
Podcast 7 × 03: Maty anelanelan'ny tafaporitsaka sy honohono
Amin'ny fizarana fahatelo amin'ity vanim-potoana fahafito ity dia miresaka momba izay rehetra manodidina ny iPhone 5 SE isika, ny alatsinainy keynote, ny lalao amin'ny iOS sy maro hafa.
Namoaka didim-pitsarana momba ny Apple ny fitsarana alemanina noho ny fampiasana tsy misy fepetra ny patanty mivantana
Toa tsy izany ny ekipan'ny mpisolovava Apple izay mitaky ny fitoriana momba ny patant ...
Nohavaozina vaovao vaovao mahaliana indray ny WhatsApp
Ny fanavaozana dia mifantoka amin'ny fanampiana endri-javatra vaovao ary fanambarana am-pomba ofisialy endri-javatra hafa izay efa misy na efa tsapanay.
Jay Z dia nanala ny trilogy Blueprint-ny avy amin'ny Apple Music sy ny serivisy streaming mozika hafa
Ny tompona rapper sy Tidal, Jay Z dia nanala ireo firaketana Blueprint tamin'ny ankamaroan'ny serivisy mozika,…
Slack for iPhone sy iPad dia novaina tamin'ny endrika vaovao maro
Slack for iPhone sy iPad dia nahazo fanavaozana lehibe tamin'ny endrika vaovao sy vahaolana maro.
TSMC sy ARM mpiara-miasa hamorona processeur 7nm, angamba ho an'ny iPhone 8
Raha marina ny tsaho, ny TSMC no mpanamboatra ny processeur A10 rehetra ary ny fiaraha-miasa amin'ny ARM dia mahatonga antsika hieritreritra fa ho taty aoriana kely izany.
Lumino City, misy fihenam-bidy ary ilaina amin'ny fotoana iray
Lumino City dia nanjary mendrika ny iray amin'ireo lalao indie referansy ao amin'ity sehatra ity ary amidy ao amin'ny App Store
Gene Munster: "75.000 $ ny vidin'ny Apple Car"
Gene Munter, izay efa naminavina ny fahitalavitra Apple nandritra ny taona maro, dia nilaza fa $ 75.000 ny vidin'ny Apple Car.
WhatsApp dia mety ho lasibatry ny FBI manaraka
Ny fampiharana fandefasan-kafatra be mpampiasa indrindra eto an-tany, WhatsApp dia mety ho lasibatry ny filaminan'ny firenena FBI manaraka.
Efa ho 9 volana taty aoriana dia mbola mila manatsara zavatra ny Apple Music
Mpampiasa mahatoky ny Apple Music aho hatramin'ny nanombohany, mila milaza aho fa nanararaotra ny ankamaroan'ny ...
Raha mandresy ny FBI, dia mety hangataka amin'i Apple ny kaody loharano iOS
Toa tezitra ny FBI, ary raha mandà ny hamorona varavarana ao ambadiky ny Apple ka resy izy ireo dia hanontany ny kaody momba ny loharano iOS izy ireo.
Araka ny efa nampoizina dia handefa ny hetsika amin'ny faha-21 mivantana i Apple
Tsy fahagagana lehibe izany: handefa mivantana ny hetsika nokarakarain'izy ireo tamin'ny 21 martsa i Apple ary hitantsika amin'ny Mac, iOS ary Windows izany.
Voarara ny fivarotana ilay Apple Watch volamena any Espana
Apple dia sendra olana iray tany Espana izay tsy noeritreretiny. Izay mpanamboatra na orinasa te-hivarotra amin'ny ...
Kodi 17 ho an'ny Apple TV 4 dia havaozina miaraka amin'ny sary vaovao sy fampisehoana tsaratsara kokoa
Hatramin'ny vao tsy ela akory izay, Kodi dia nantsoina hoe XBMC. Efa ela no fantatro ny fisiany, saingy tsy haiko ny manararaotra azy ...
Ny patanty dia hamadika ny Apple Watch ho rafitra fampitandremana maika
Ny patanty Apple vaovao dia mamaritra ny rafitra iray izay ahafahan'ny Apple Watch mampandre ny vonjy taitra raha manana olana ara-pahasalamana isika.
Periscope dia mandresy ao amin'ny Spanish App Store noho i Piqué
Periscope dia fampiharana izay nampiasain'i Piqué (mpiaro afovoan'ny Fútbol Club Barcelona) nandritra ny roa herinandro.
Matahotra i Eddy Cue fa hanara-maso antsika ny fanjakana raha maharesy ny FBI ny raharaha
Tsy irery izy, fa i Eddy Cue, Apple's VP, dia nanamafy ny ahiahy fa mety hijery antsika ny fanjakana raha mandresy ny FBI amin'ny tranga misy izy ankehitriny.
Nahazo famatsiam-bola ho an'ny fiarany mizaka tena i GeoHot, angano momba ny Jailbreak
GeoHot, malaza amin'ny sehatry ny jailbreak na ny fanaovany zavatra mitovy amin'ny PS3, dia nahazo famatsiam-bola hamoronana ny fiara mizaka tena.
Sacha Baron Cohen dia nahazo aingam-panahy avy amin'ny lahatenin'i Apple ho fampiroboroboana ny sarimihetsika vaovao
Ny Apple keynotes dia nanjary loharanom-aingam-panahy ho an'ny skits. Sasha Baron Cohen dia tsy ...
Nilaza i Snowden fa dondrona ny fangatahan'ny FBI; manazava ny fomba hialana amin'ny famafana auto
Edward Snowden bullshitters ny fangatahan'ny FBI ary nilaza tamin'izy ireo ny fomba ahafahan'izy ireo mandingana ny famafana data automatique.
CloudMagic, ilay mailaka vaovao ao amin'ny rahona ho an'ny iOS
Mandinika ny CloudMagic izahay, mpirotsaka hofidina mailaka ho tsara indrindra amin'ny iOS, manisa tsara ny tombony sy ny lafy tsarany.
Toeram-pitrandrahana ExxonMobil maherin'ny 6000 no manohana an'i Apple Pay
Ny teknolojia Apple dia manitatra, amin'ny fomba hafa, amin'ny alàlan'ny tobin-tsolika mihoatra ny 6.000 ExxonMobil
Vaovao 5 an'ny Apple mialoha ny tsaho (tafiditra ao ny iPhone 7 sy iPhone OLED)
Ny tsaho momba ny vaovao Apple dia miandrandra maodely mihoatra ny iray amin'ny iPhone izay hanova be ny endri-javatra amin'ny iPhone 7.
Mampiseho ny fomba ahafahantsika mampiasa ny fakantsary roa araka ny Apple
Ny iPhone 7 dia mety ho tonga amin'ny fakan-tsary roa ary amin'ity horonan-tsary ity dia hitantsika ny iray amin'ireo fomba ahafahantsika mampiasa azy.
Hiakatra fitsarana ambony ny fanapahan-kevitry ny fitsarana New York ny FBI
Ny fitsarana amerikanina dia hampiakatra fitsarana ambony amin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana any New York manakana azy ireo tsy hanokatra fitaovana fanaovana heloka bevava.
Ny patanty Apple dia mampiseho ny fomba ahafahan'izy ireo mampiasa Liquid Metal
Ny patanty vaovao vao nomena an'i Apple dia afaka manazava ny zavatra hampiasan'izy ireo ny Liquid Metal amin'ny ho avy ankoatry ny fantsom-batana SIM.
Steve Wozniak dia manohana an'i Apple manohitra ny FBI indray amin'ny resadresaka amin'ny TBS
Steve Wozniak dia niresaka indray momba ny fifandonana teo amin'i Apple sy ny FBI ary nanao izany mba hiandany amin'ilay orinasa natsangany tamin'i Jobs.
Mihaona amin'ireo miliardera hafa i Tim Cook hiady hevitra momba an'i Donald Trump
Vao tsy ela akory izay i Tim Cook dia nihaona tamin'ireo miliardera hafa mba hiresaka ny vokatry ny fandresena ho an'ny kandidà ho filoham-pirenena Donald Trump.
Apple dia manomana iPhone miaraka amin'ny efijery 5.8 ″ AMOLED ho an'ny taona 2018 [RUMOR]
Araka ny tsaho tonga any aminay avy any Taiwan, Apple dia hanomana iPhone misy efijery AMOLED 5.8-inch ho an'ny taona 2018.
Ny tazo amin'ny fividianana sy fivarotana rindranasa sy ny biby ao aminy
Ao amin'ny iOS App Store dia matetika isika no mahita tazo lohahevitra izay maharitra amam-bolana maro, ary ny sasany aza ...
Ny fanerena an'i Apple manokana amin'ny FBI dia mety ho olana iray mety hiafara amin'ny orinasa mandositra ny firenena.
Apple dia tsy maintsy mandoa $ 450M ho an'ny tranga amin'ny vidin'ny e-Books
Tamin'ny 2013, notoriana i Apple noho ny vidiny boky nomerika ao amin'ny iBooks Store. Manao ahoana izy ao…
Mampiseho ny fivoaran'ny Apple Campus 2 ankehitriny ny horonan-tsary fahitana drôna vaovao
Toy ny mahazatra dia namerina namoaka horonantsary tao amin'ny Apple Campus 2 mampiseho ny fandrosoan'ny fananganana izy ireo ankehitriny.
Ho tonga any India ihany koa ny tsenan'ny iPhones nohavaozina
Ny tsenan'ny iPhones nohavaozina, adjectif ampiasaina amin'ny fitaovana nohavaozina, dia ho avy tsy ho ela ihany koa any India.
Apple dia hampitombo ny dividendany telovolana 10%
Taorinan'ny sori-dalana napetraka hatramin'ny 2012, Apple dia hampiakatra ny dividendany hatramin'ny 10% ary hividy ny fizarana mitentina 30.000 tapitrisa dolara.
Nodimandry tamin'ny faha-83 taonany i Mompera Robert Palladino, izay nanentana ny endrik'i Mac
Nodimandry teo amin'ny faha-83 taonany i Mompera Robert Palladino mpiantsoantso. Izy no nanome aingam-panahy ny typeface izay nampiasaina tany am-boalohany Macs.
Notsapainay ny Parrot Jumping Sumo, drone iray tany izay manana fanahin'ny mpikaroka
Jumping Sumo dia mpikaroka tsy manana elatra liana, afaka miatrika sakana rehetra ary mampiala voly ny tanora sy ny antitra.
I Frantsa dia mifidy ireo tompon'andraikitra ao amin'ny orinasa migadra izay miaro ny fanafenana data
Ny latsa-bato voalohany amin'ny ambaratonga ambany indrindra amin'ny Parlemanta frantsay dia manolotra ireo mpitantana orinasa migadra izay miaro ny fanafenana.
Intel dia hamokatra ampahany manan-danja amin'ny LTE Modem amin'ny chips iPhone 7
Intel, ilay orinasa mpanamboatra processeur malaza, dia hamokatra ampahany amin'ny LTE Modem an'ny iPhone 7, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa noho ny ankehitriny.
Raha ny filazan'ny UNHCR, mety hampidi-doza ny fiainana ny fanalefahana ny fiarovana ny iOS
Betsaka amintsika no miaro ny tsiambaratelo, saingy ny UNHCR dia mandeha lavitra amin'ny alàlan'ny fiantohana fa ny fandikana izany dia mety hampidi-doza ny ainy.
Tsy avelan'ny Instagram manampy rohy mankany Telegram sy Snapchat
Tsy hainay izay ao an-tsainy ao amin'ny Facebook. Ny tambajotran-tserasera misy azy no be mpampiasa indrindra amin'ny ...
Samsung dia tsy manohana an'i Apple amin'ny ady ataony amin'ny FBI. Misy gaga ve?
Na dia mitovy be amin'ny Apple aza ny filazany, Samsung dia tsy mandray ny sisiny ao am-polony izay mitazona ny paoma amin'ny FBI, izay tsy mahagaga.
ACLU koa dia manohana an'i Apple amin'ny ady ataony amin'ny FBI
Hatramin'ny nanoratan'i Tim Cook ny taratasiny hiarovana ny tsiambaratelon'ny mpampiasa, maro no nanohana azy. Ny farany dia ny ACLU.
Apple manokatra kaonty mpanohana Twitter vaovao
Apple dia manohy mampitombo ny fisiany amin'ny media sosialy. Na dia mbolajanona aza ny kaonty Twitter @apple, izay angamba ...
Apple dia mahazo ny patanty ahafahany manao iPhones malefaka
AApple dia nomena iray tsy iray, fa patanty 54 amin'ity herinandro ity. Ny iray tamin'izy ireo dia afaka namela ny orinasa ...
Apple patent antsipirihany azo henoina headphones
Raha ao an-tsaina ny iPhone 7 dia tokony nametraka patanty ho an'ny headset Bluetooth hybrid i Apple izay azo apetaka na esorina amin'ny tariby.
Afaka mandefa antontan-taratasy ny WhatsApp ankehitriny, manambara izany ilay kaody
WhatsApp dia mamela anao handefa antontan-taratasy amin'ny alàlan'ny fampiharana, na izany aza, io safidy io dia mbola tsy navadika ao anaty kaody.
Google Maps dia manome antsika ny mety hanampiana fijanonana amin'ireo zotra
Google manohy manatsara ny fampiharana ny sarintany isan'andro. Tamin'ny volana oktobra lasa teo ny serivisy tranokala an-tsarintany ...
TweetMaps dia mamela anao hijery fironana amin'ny sari-tany
Amin'ny TweetMaps dia azonao atao ny manaraka ny hetsika Twitter rehetra mifandraika amin'ny fomba geolocated
Nanesoeso ny sariny Super Bowl manjavozavo i Tim Cook tamin'ny fivorian'ny tompon-trano
Nandritra ny fihaonany tamin'ireo tompon-trano dia nivazivazy i Tim Cook momba ilay sary manjavozavo nalainy tao amin'ny Super Bowl. Fa zavatra tokony vazivazinao ve izany?
Mpitsara any New York: tsy afaka manery an'i Apple hamaha iPhone ny governemanta
Tanjona voalohany ho an'i Apple amin'ny ady nifanaovany tamin'ny FBI: nilaza ny mpitsara New York fa tsy afaka manery azy ireo hamaha ny iPhone ny governemanta.
Apple mitazona ny teny filamatra Think Other
Rehefa niverina tany Apple i Steve Jobs tamin'ny taona 1997, ny zavatra voalohany nataony dia ny famoronana teny filamatra malaza izay ...
Tesla dia manakarama olona ambony hafa niasa tamin'ny chips Apple
Ny fifanakalozan'ny mpiasa eo amin'i Tesla sy i Apple dia mitohy. Tamin'ity indray mitoraka ity dia ilay mpanamboatra fiara no nanao sonia mpiasa Apple hafa.
Steve Jobs lany an'i Oscar, fa arahaba tsara, Leo!
Ny marainan'ny maraina dia natao ny gala Oscars faha-88 ary tsy nisy ny tsy nampoizina momba ilay mpilalao sarimihetsika lehilahy tsara indrindra, fa nisy kosa ilay ho an'ny vehivavy.
Tsy tian'ny Steve Jobs ho lasa iFans ny zanany
Ny zanak'i Steve Jobs dia tsy nampiasa ny iPad tamin'ny fotoana nampidirana azy. Te hahafantatra ny antony ao ambadik'ity fahalianan'ny fianakavianana Jobs ity ve ianao?
Mampiaka-peo ny Apple fa tsy hamorona "GovtOS"
Tamin'ny fizarana farany an'ny Apple vs. FBI ho an'ny tsiambaratelo, ny orinasa tantanan'i Tim Cook dia manana ...
Hazo selfie dia tonga amin'ny MacBooks
Miala tsiny, fantatro. Io no nila hitanay. Raha tsy manana ny ampy amin'ireo tia tena isika ...
Nahemotra hatramin'ny 5 martsa ny famoahana IPhone 22se sy iPad Pro [RUMOR]
Ny zavatra tiako holazaina voalohany ary ataoko mazava hatramin'ny voalohany dia tsaho izany. Ho ahy dia ...
Ny mpamorona ny fampiharana fandefasan-kafatra azo antoka indrindra nosoniavin'i Apple
Apple dia manohy miloka amin'ny fiarovana, araka ny naseho tamin'ny fanaovan-tsonia Signal, iray amin'ireo fampiharana fandefasan-kafatra azo antoka indrindra.
Tim Cook: "ny famoronana varavarana ambadika dia mitovy amin'ny homamiadana amin'ny rindrambaiko"
Araka ny voalazan'ny CEO Apple, ny rindrambaiko tadiavin'ny FBI hamorona orinasa paoma dia homamiadan'ny rindrambaiko misy vokany mahatsiravina.
Apple 3D Touch: lasa, ankehitriny ary ho avy
Apple dia nampiditra ny Force Touch tamin'ny Apple Watch ary nahamatotra azy tamin'ny 3D Touch an'ny iPhone, saingy tonga ny fotoana hanaovany bebe kokoa
Tesla dia nanakarama injenieran'ny fitaovana avy any Apple
Elon Musk dia te-hanodidina ny tenany hatrany amin'ny tsara indrindra, izany no antony nanakarama injeniera roa avy any Apple.
Ny fanehoan-kevitra ao amin'ny Facebook izao dia efa ofisialy ary azon'ny rehetra atao
Tapitra ny fiandrasana. Efa ofisialy izao ny fanehoan-kevitra ao amin'ny Facebook, noho izany isika dia afaka mampiasa bokotra bebe kokoa ankoatra ilay "J'aime" malaza.
Samsung dia manery an'i Apple hanova ny efijery mankany amin'ny OLED
Na dia tsy napetraka amidy eny an-tsena aza, ny Samsung Galaxy S7 sy ny kalitaony dia efa ...
Apple Mandefa "Podcasts Connect" mba hitantana Podcasts
Raha mpamorona Podcast ianao ary mampakatra azy ireo matetika any iTunes, azo antoka fa ho faly ianao hahafantatra fa nandefa "Podcasts Connect" i Apple hitantanana azy ireo tsara kokoa.
Telegram dia nohavaozina miaraka amin'ny vaovao hankalazana 100 tapitrisa
Telegram dia manohy manavao hatrany, atorinay anao ny vaovao momba ny fanavaozana farany.
Apple dia maniry ny hanapa-kevitra ny kongresy amin'ny fifanolanana miaraka amin'ny FBI ny Apple
Apple dia te hanana ny teny farany amin'ny fifanolanan'izy ireo amin'ny FBI ny Kongresin'i Etazonia momba ny fanoratana ny iPhone 5c.
Stack, ny famoronana farany avy amin'ny mpamorona ny 2048
Anisan'ireo filalaovan'ny lalao ao amin'ny App Store ny fisian'ny rivotra madio vaovao miaraka amin'ireo fahatsiarovan-tena tamin'ny fahombiazana hafa tato ho ato
Tsy hametraka ohatra iray, izay mandeha: ny Departemantan'ny fitsarana dia te-hamaha iPhone 12 hafa
Tsy hametraka ohatra izany, tsia. Izany no antony fikasan'ny Departemantan'ny Fitsarana Etazonia hamaha iPhones 12 miampy ilay any San Bernardino.
Ahoana no fomba fiasan'ny rafitra fakantsary roa an'ny iPhone 7 [video]
Mety hahagaga raha tsy miaraka amina fakan-tsary roa ny iPhone 7. Te hahafantatra ny mety ho sary ve ianao? Jereo ity horonantsary ity ary esory ny fisalasalanao.
IBM dia hitondra ny fiteny programme Swift ho any amin'ny rahona
Ny fiteny fandaharana izay natombok'i Apple roa taona lasa izay dia manana mpiara-miasa vaovao: IBM. Ny orinasan'ny fahavalon'ny Jobs dia mikasa ny hampiasa azy io ho an'ny rahona.
Ireo niharam-boina tao San Bernardino dia manohana ny FBI amin'ny ady nifanaovany tamin'i Apple
Tsy tokony hahagaga antsika izany satria io no zavatra voajanahary indrindra tokony hatao. Ny fianakavian'ireo niharam-boina dia nanohana ny FBI tamin'ny fifanolanana nataony tamin'i Apple ho an'ny tsiambaratelo.
Nanamafy ny FBI fa manampy ny Apple na dia nanova ny Apple ID aza izy ireo
Ny raharaha Apple v. ny FBI, ary ny departemantan'ny fitsarana dia manizingizina fa manampy azy ireo i Apple na dia nanova ny Apple ID aza izy ireo.
Io no dikan'ny "i" amin'ny vokatra Apple raha ny filazan'i Steve Jobs
Fantatrao ve ny dikan'ny "i" eo ​​alohan'ny vokatra Apple sasany? Steve Jobs dia manana ny fanazavany manokana, ary midika zavatra maro miaraka amin'izay izy io.
Toa tsy mahaliana olona mihitsy ny iPhone 5. Fa maninona?
Ny iPhone 5se dia saika tsy miteraka fientanam-po amin'ny haino aman-jery, inona ny antony? Nandinika ny toe-javatra nisy azy iray volana talohan'ny nanombohany.
Apple indray no orinasa malaza indrindra amin'ny taona fahasivy manaraka
Herintaona indray, ary misy sivy misesy izao, Apple no voatondro ho orinasa ankafizin'ny olona indrindra eto an-tany alohan'ny mpifanandrina aminy lehibe, ankoatry ny hafa.
Steve Wozniak: "Tsy afaka matoky ny governemanta izahay"
Steve Wozniak, mpiara-manorina an'i Apple, dia niresaka momba ilay raharaha sniper ihany koa. Hanao na hanohitra ny orinasa naorinao ve ianao?
Manatevin-daharana an'i Apple ho an'ny tsiambaratelon'ny mpampiasa koa i Microsoft
Apple dia manohy mahazo fanohanana amin'ny ady an-tsokosoko manohitra ny FBI ho fankasitrahana ny tsiambaratelon'ny mpampiasa. Ny farany naneho ny fanohanany dia i Microsoft.
Ny iPhone amin'ny ho avy dia afaka mamaky tenin'ny tanana
Apple dia manaparitaka rafitra famakiana 3D izay ahafahan'ny iPhone na fitaovana hafa mamaky tenin'ny tanana. Ho hitantsika amin'ny iPhone 7 ve izany?
Nilaza i Snowden fa ny raharaha fiarovana an'i Apple manohitra ny FBI no lehibe indrindra tao anatin'ny folo taona lasa
Tsy lazainay izany; Hoy i Snowden: Ny fiarovan'i Apple ny tsiambaratelo manohitra ny FBI no tranga fiarovana lehibe indrindra tao anatin'ny folo taona lasa.
Milahatra eo anoloan'ny Apple Store izy ireo mba hanohanany an'i Tim Cook ho fankasitrahana ny fiainana manokana
Ireo mpampiasa Apple dia tsy milahatra mba hividy iPhone farany. Ankehitriny koa dia ataon'izy ireo izany hanohanana an'i Tim Cook manohitra ny FBI.
Izahay dia mamakafaka ny Xiaomi Mi 20.000mAh, ilay bateria ivelany marani-tsaina hamela anao hameno in-8 ny iPhone 6s anao alohan'ny mila plug indray.
Apple dia nanao 21% an'ny processeur smartphone tamin'ny 2015
Apple ihany no manamboatra processeur-ny tenany, fa tamin'ny 2015 kosa dia nahazo ny anjarany 21% amin'ny SoC ho an'ny finday avo lenta ary 31% amin'ny takelaka.
Ny horohorontany tany Taiwan dia nandratra ny TSMC mihoatra ny noeritreretina taloha
TSMC no ho mpanamboatra ny processeur iPhone 7 rehetra, raha toa ka manamboatra ny simba tamin'ny horohoron-tany tamin'ny 6 febroary izy ireo.
Araraoty tsara ny anti-radar an'ny iPhone miaraka amin'ity rindrambaiko ity izay manaitra anao amin'ny radara raikitra sy finday rehetra
AT & T dia manomboka fitsapana 5G: 10 ka hatramin'ny 100 heny haingana kokoa noho ny LTE
Efa tonga any amin'ny faritra misy anao ve ny LTE na 4G? Ie? Mihevitra ve ianao fa ampy haingana? Hanomboka hitsapana ny tamba-jotra 5G miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny aretim-po mandritra ny taona 2016 ny AT&T.
Mihevitra ve ianao fa nahita an'i Steve Jobs rehetra? Eto, manana horonan-tsary iray ianao tamin'ny fotoana nanombohan'ny CEO taloha an'i Apple ny solosaina NeXT tamin'ny 1988.
Serato Pyro, ny fampifangaroana mozika manan-tsaina dia tonga amin'ny iOS
Ny fampifangaroana mozika Smart, Spotify-integrated dia tonga amin'ny iOS avy amin'ny Serato veteran sy ny app Pyro.
Apple dia miatrika fitoriana hafa, amin'ity indray mitoraka ity noho ny fandikana ny patanty amin'ny 3D Touch
Niatrika fitoriana vaovao i Apple. Amin'ity tranga ity dia nilaza ny orinasa iray fa ny 3D Touch an'ny iPhone 6s sy 6s Plus dia manitsakitsaka ny telo amin'ireo patanty.
Fetch, ny fampiharana izay milaza amintsika ny karazana alika misy sary
Microsoft nandritra ny fotoana kelikely dia mitantana ny fanitarana ny tontolon'ny ecosystem misy azy amin'ny sehatra finday rehetra ...
Doka Flash an'i Google Abandons
Tamin'ny taon-dasa no ratsy indrindra ho an'ny Flash. Tamin'ny 2015, marobe ireo marefo hita eo amin'ny rafitra noforonina ...
Fahadisoana 53: izay rehetra tokony ho fantatrao momba ity lesoka mahafaty ity
Error 53 dia eo am-bavan'ny olona rehetra izao ary tsy mahagaga izany. Ho hitanao eto izay rehetra fantatra hatreto momba ity lesoka mampidi-doza ity.
Apple dia manoro hevitra ireo mpamorona hametraka ilay fanamarinana vaovao
Taorian'ny andianà olana tamin'ny volana novambra lasa teo rehefa nisintona ny rindranasa avy amin'ny magazay fangatahana ho an'ny ...
Rosia te-hanery an'i Apple sy Google handoa VAT bebe kokoa
Te-hanery ny orinasa lehibe toa an'i Google sy i Apple handoa VAT bebe kokoa i Russia, zavatra iray izay azo tsikaritra rehefa mividy fangatahana amin'ny App Store.
MSQRD dia manolotra sivana an-jatony am-polony ho an'ny iPhone
MSQRD no rindrambaiko azo antoka hampiasaina betsaka amin'ny iPhone ampiasainao amin'ny sivana mihetsika ho an'ny sary sy horonan-tsary
Mampahafantatra ilay robot mpidoroka amin'ny lalao iPhone
Ity robot ity dia afaka milalao tsy an-kijanona ary manao fitambarana mahatalanjona amin'ny lalao iOS marobe, ary koa mandray naoty ary manao baiko am-peo.
Apple dia manome loharano malalaka ny benchmark Swift
Fotoana fohy taorian'ny nanaovana ilay loharanom-baovao ho loharano misokatra, Apple koa dia nanao loharano malalaka ho an'ny benchmarking suite.
Google dia manome 2 GB ao amin'ny Drive mba hankalazana ny andro amin'ny Internet azo antoka
Ny International Safe Internet Day dia mampiroborobo ny fampiasana teknolojia vaovao tompon'andraikitra sy azo antoka indrindra amin'ny ankizy ...
Ny zavatra niainako tamin'ny iOS 9.3 hatreto
Ity ny traikefan'ny mpampiasa aorian'ny herinandro maromaro nampiasana ny iOS 9.3 sy ny beta rehetra hatreto.
Apple dia miresaka momba ny Error 53: hiarovana ny mombamomba antsika izany
Apple dia mamaly ny tsikera voaray noho ny lesoka malaza ankehitriny 53. Misy dikany ny valinteninao, fa io ve no tsara indrindra ho an'ny mpanjifanao?
Apple dia marina amin'ny loko gamut an'ny iPhone 5se
Apple dia mampiasa ny gamut miloko amin'izao fotoana izao ao amin'ny iPhone 5se vaovao mba hahasarika kokoa ny mpihaino mahazatra.
Apple dia afaka miara-miasa amin'ny Energous amin'ny famandrihana tsy misy tariby amin'ny iPhone ho avy
Apple dia afaka niara-niasa tamin'ny orinasa Energous mba hitondra tena izy tsy misy tariby amin'ny iPhone amin'ny ho avy. Ho hitantsika amin'ny iPhone 5e na iPhone 7 ve izany?
Famerenana ny AirMail, mpanjifa mailaka Premium
Manadihady ny AirMail izahay, mpanjifa mailaka ho an'ny iPhone miaraka amina safidy tsy manam-petra tsy manam-petra ary famolavolana tena mitandrina. Mendrika handoa € 4,99 amin'izany ve ianao?
Tim Cook miresaka ny vaovao Apple amin'ny mpitantana sy ny mpiasa
Taorian'ny tatitra momba ny telovolana dia nihaona tamin'ny mpitantana sy mpiasa Apple hafa i Tim Cook mba hiresaka momba ny vaovao Apple.
Afaka mamindra ny Tesla Model S anao amin'ny Apple Watch ianao izao
Ny lahasa "invoke" dia tonga amin'ny iPhone sy Apple Watch hifehezana ny Tesla Model S.
Fitsapana Twitter vaovao: bokotra manokana handefasana GIF
Mizaha fitsapana vaovao ny Twitter. Amin'ity indray mitoraka ity dia bokotra vaovao izay hanamora antsika hizara karazana sary tena mahaliana.
Ny App Store sy ny serivisy Apple hafa dia manana olana amin'izao fotoana izao
Miaina olana amin'ny serivisin'i Apple sasany ve ianao? Tsy ianao irery. Ny olana dia eo amin'ny mpampiasa erak'izao tontolo izao.
Apple patanty dia manisy tsipiriany momba ny tsindry ID mikasika ny tsindry. Veloma amin'ny bokotra fanombohana?
Ny patanty Apple dia manome tsipiriany momba ny ID tsindry mora tohina amin'ny tsindry miaraka amin'ny teknolojia mitovy amin'ny 3D Touch. Ny fiandohan'ny faran'ny bokotra an-trano ve?
LegbaCore, ilay fividianana vaovao an'i Apple izay nitranga tamin'ny Novambra
Apple dia nahazo an'i LegbaCore, orinasa iray manam-pahaizana manokana amin'ny famoronana firmwares azo antoka, tamin'ny Novambra tamin'ny taon-dasa. Hanana iOS azo antoka kokoa ve isika amin'ny ho avy?
Apple patentin'ny efijery marobe izay tsy ilaintsika kasihina
Apple dia nanaparitaka efijery multi-touch izay miasa raha tsy mila fifandraisana ara-batana. Fa ahoana no hihinananao an'io? Izahay dia manazava aminao ny zava-drehetra.
"Apple voaozona." Ny abidia dia mihoatra io ary efa orinasa sarobidy indrindra manerantany
Tsy Apple intsony no orinasa sarobidy indrindra eto an-tany. Izao dia Abidia, ilay anarana vaovao an'ny orinasa fantatra amin'ny anarana hoe Google.
Force Touch amin'ny fiara? Ny Synaptika dia mihevitra izany
Ny touchscreen dia eny rehetra eny. Na dia marina aza fa tsy ny iPhone no telefaona voalohany misy efijery ...
Apple mangataka amin'ny FCC hanaiky ny fitaovam-pandrenesana MFi
Nangataka tamin'ny FCC (Vaomieran'ny Serasera federaly) i Apple mba hanaiky ny fitaovam-pandrenesana MFi mba hampiroborobo ny fanavaozana ny fidirana.
Apple dia nahazo FlyBy Media, teknolojia izay "mahita" ny manodidina azy
Amin'ny inona ny fahazoana faharoa amin'ity herinandro ity, Apple dia nividy FlyBy Media, izay mamorona rindrambaiko izay "mahita" ny zava-drehetra manodidina azy. Ho an'ny zava-misy virtoaly?
Apple dia nahazo ny LearnSprout fanombohana, teknolojia ho an'ny fanabeazana
Toa mbola hanohy hiloka amin'ny fanabeazana i Apple, na io no takatsika aorian'ny nahazoany azy farany: LearnSprout.
Apple CFO dia milaza fa eo anelanelan'i Eoropa sy Irlandy ny famotopotorana ny saram
Araka ny voalazan'ny CFO an'i Apple, ny famotopotorana ny saram-bola dia zavatra tokony halamina eo anelanelan'i Eropa sy Irlandy; Nihetsika tsara i Apple.
Ny iPhone 7s dia afaka mampiasa famandrihana finday lavitra
Apple dia manomana teknolojia ahafahana mametra ny fitaovana iOS tsy misy tariby sy lavitra amin'ny taona 2017. Hahita ny famandrihana tsy misy tariby amin'ny iPhone 7s ve isika?
Angela Ahrendts dia nilaza fa mandray ny mpiasan'ny Apple Store toy ny mpitantana izy ireo
Satria i Angel Ahrendts dia niditra tao amin'ny ekipan'ny Apple ho lohan'ny fizarana ...
Ny PR taloha an'i Apple dia nandeha tany amin'ny Twitter
Hatramin'ny tapaky ny taona lasa dia noteren'ny mpitantana ambony hametra-pialana ny CEO taloha tao amin'ny Twitter, ny rano ...
Apple dia namoaka ny beta ampahibemaso faharoa an'ny OS X 10.11.4
Androany tolakandro (any Espana) Apple dia nandefa ny beta ampahibemaso faharoa an'ny iOS 9.3. Ho feno ity kinova iOS ity ...
DLe, rakibolana fampiharana RAE ho an'ny iPhone
Ny Royal Academy of the Spanish Language (RAE) dia mandefa fampiharana mampiditra ny rakibolana ofisialiny ho an'ny iPhone
Apple dia manomana ny Street View azy manokana
Tadidinao ve ilay sary teo aloha? Nahita ny fiara tamin'ny taona lasa ary efa nanamafy i Apple fa hampiasa ny angon-drakitra ao amin'ny Apple Maps. Fijery an-dalambe?
Apple dia manaparitaka solomaso boribory manana habe kely sy kalitao avo kokoa
Mitohy ny fikatsahana an'i Apple hahita fakan-tsary tonga lafatra. Raha ny fahalalantsika azy dia nanamboatra solomaso boribory vaovao izy ireo izao.
Nirehitra ny orinasa Foxconn izay niangonan'ny iPhone
Ny iray amin'ireo ozinina ampiasain'ny Foxconn's Apple dia toa nirehitra nefa tsy niteraka fahantrana manokana
Hevi-doka Apple Car: Mihoatra ny fiara
Heveriko fa tsy misy vokatra Apple izay tsy mamorona foto-kevitra. Miaraka amin'izany ao an-tsaina dia efa manana ny hevitra voalohany amin'ny Apple Car isika.
Ny iPhone 5se sy iPad Air 3 dia havoaka amin'ny volana martsa, fa tsy ny Apple Watch 2
Rehefa manakaiky ny volana Martsa, heverina ho volana hanoloran'i Apple fitaovana vaovao, tsikelikely ...
Araka ny karamany farany, Apple dia matotra amin'ny Virtual Reality
Raha ny filazan'ny karama farany, Apple dia matotra amin'ny fidirana amin'ny tsena zava-misy virtoaly. Hahita solomaso Apple VR ve isika?
Apple manokatra Ivotoerana fampandrosoana voalohany an'ny iOS App
Nanambara i Apple fa hanokatra ny ivon-toerana fampivoarana ny fampiharana iOS voalohany eto Italia izy ary manantena ny hisokatra bebe kokoa amin'ny ho avy manerantany.
Sina no motera vaovao an'ny App Store
Nandritra ny fotoana vitsivitsy dia lasa iray amin'ireo motera lehibe an'ny orinasa i Shina miaraka amin'ny ...
Snapchat, fampiharana izay tsy mahavita famolahana any Espana
Izahay dia mamakafaka ireo antony tsy ahatongavan'i Snapchat any Espana na dia voadona mafy any amin'ny firenena hafa aza izy
Ho avy tsy ho ela ny rafitra famoretana tranokala Google ao amin'ny Chrome
Nanolotra i Google fa maivana kokoa ny tranokala. Ahoana no ahafahana manao izany raha tsy izany, Chrome voalohany no fizahana azy voalohany.
Apple dia mametraka fisie fampiharana hanokatra Apple Stores any India
Apple dia efa ela no nivarotra ny vokariny tany India tamin'ny alàlan'ny antoko fahatelo, saingy mety hiova tsy ho ela izany.
Apple hanome vokatra maimaim-poana amin'ny komity Super Bowl
Raha tsy ampy ho azy ireo intsony ny fety dia nanambara i Apple fa hanome vokatra orinasa maimaimpoana ho an'ny komitin'ny Super Bowl.
Apple voampanga ho nanararaotra ankizy hahazoana kobalta ho an'ny bateriny
Apple sy orinasa hafa dia voampanga ho nanararaotra ankizy. Ny ankizy dia mahazo kobalta ho an'ny baterin'ny fitaovana.
Ny mpitsara dia manakana an'i Samsung tsy hivarotra telefaona taloha izay manimba ny patantin'ny Apple
Toa nifarana ny iray amin'ny fifanolanana misy eo amin'i Apple sy Samsung ary ny mpitsara iray dia manakana ny Koreana tsy hivarotra finday taloha any Etazonia.
Apple dia miditra amin'ny lampihon'ny marika be mpampiasa indrindra ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra
Apple dia niditra ny lampihazon'ny marika malaza indrindra ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra, mialoha ny fahavalony akaiky an'i Samsung.
Tonga maimaimpoana ho an'ny mpampiasa rehetra ny WhatsApp
Hanala ny iray amin'ireo sakana misakana anao tsy hitombo ny WhatsApp. Manomboka izao dia maimaimpoana ho an'ny mpampiasa rehetra izy io.
Nintendo hamorona lalao finday miaraka amin'ireo toetrany amin'ny 2016
Nintendo dia mikasa ny handefa lalao starring ny endri-tsoratra ao amin'ny 2016. Hisy lalao vaovao miaraka amin'i Mario ho an'ny iPhone?
Instagram dia manampy fiasa 3D Touch amin'ny iPhones 5s, 6 ary 6 Plus
Ireo fiasa vaovao tafiditra ao amin'ireo maodely iPhone farany indrindra dia ny fitsiriritan'izay rehetra tsy ...
Manolotra fihenam-bidy mahavariana i Microsoft raha manolotra ny Apple Watch anao ianao
Manome fihenam-bidy mahomby ho anao i Microsoft raha raisinao ny Apple Watch ho takalon'ny Microsoft Band 2.
F.lux dia miresaka momba ny Night Shift an'ny iOS 9.3
F.lux, ilay orinasa manao ny endri-javatra iorenan'ny iOS 9.3's Night Shift, dia nanoratra taratasy misokatra ho an'i Apple.
Ny horonantsary farany tamin'ny fiainan'i Steve Jobs dia nahazo loka tamin'ny Hollywood Oscars.
Apple dia afaka nividy Time Warner tamin'ny serivisy fahitalavitra mivantana
Ny tsaho farany dia milaza fa afaka mividy Time Warner i Apple mba hanararaotany ny atiny rehetra ho an'ny sehatra fahitalavitra vaovao
Meme Studio, fampiharana iray hanaovana meme ao anatin'ny segondra
Meme Studio dia mpamorona meme miaraka amina sary an'arivony maro vonona ny ho babon'ny sainao
IPhone D vaovao, finday avo lenta ho an'ny mpimamo [hatsikana]
Rehefa mamo isika dia tsy efa manana olana ampy ve? Eny, mba hisorohana ny loza isan-karazany dia tonga ny iPhone D vaovao.
Tsy matoky ny fanantenan'i Apple ny mpandinika
Ny fizarana Apple dia nidina tamin'ny teboka iray izay tsy nandehanany nandritra ny taona maro, fa ny mpandalina kosa dia miakatra.
Miasa amin'ny fampiharana Facebook Messenger an'ny Mac ny Facebook
Sary iray an'ny mpiasa Facebook no tafaporitsaka tamin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny birao Facebook OS Mac an'ny Facebook Messenger.
Apple hanangana Bluetooth Wireless Wireless EarPods
Araka ny tsiliantsofina farany, Apple dia handefa Bluetooth EarPods sasany izay tsy hanana tariby ary tsy hiankina tanteraka amin'izy samy izy.
Famantarana bebe kokoa? Apple dia misoratra anarana domains telo mifandraika amin'ny Apple Car
Ny fitaovana manaraka mifandraika amin'izany dia ho fiara mahaleo tena ary hitantsika izao fa Apple dia efa nisoratra anarana domains mifandraika amin'ny Apple Car.
Maherin'ny 200.000 ny olona mangataka amin'i Apple hitazona ny seranana 3.5mm amin'ny iPhone 7
200.000 3.5 mahery ny olona niaraka niangavy an'i Tim Cook sy ny orinasa tsy hanala ny seranan-tsambo 7mm amin'ny iPhone XNUMX.
Efa misy 800 tapitrisa mpampiasa Facebook Messenger
Vao avy nanambara ny isan'ny mpampiasa mavitrika amin'ny sehatry ny fandefasan-kafatra i Facebook: 800 tapitrisa
Fitsarana vaovao momba an'i Apple. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nalaina avy tamin'ny sensor an'ny Apple Watch
Apple dia mahazo vola be, saingy azo lazaina fa tsy handresy amin'ny fitoriana izany. Notorian'izy ireo indray ny orinasa, ankehitriny ho an'ny sensor Apple Watch.
Apple dia hanolotra ny fifandanjan'ny telovolana voalohany amin'ny 2016 amin'ny 26 Janoary
Apple dia hanolotra ny mizana amin'ny telovolana voalohany amin'ny 2016 amin'ny 26 Janoary. Hanome angon-drakitra momba ny Apple Watches firy moa izy ireo?
Kimoji, fahombiazana azo vinavinaina nefa tsy mendrika
Kimoji no farany ao amin'ny App Store an'i Kim Kardashian
Griffin's BreakSafe no MagSafe tsy hita ao amin'ny Macbook 12-inch
Griffin dia nampiditra tariby misy mpampitohy izay ahafahantsika manampy ny fiarovana ny mpampifandray MagSafe ao amin'ny Macbook
Ny fenitra Wi-Fi vaovao dia manome fanjifana bebe kokoa sy fanjifana ambany kokoa
Isaky ny manana olana amin'ny tamba-jotra Wi-Fi aho ary misy olona manodidina ahy dia mivazivazy aho hoe «iza no namorona ...
Amin'ity horonantsary ity dia ho hitanao ny fomba ahatonga anao ho tany am-boalohany indrindra amin'ny alina amin'ny fanokafana ny tavoahangy champagne na champagne amin'ny iPhone-nao.
Moa ve voafintina mafy amin'ny lasa Steve Jobs i Tim Cook?
Ny CEO ankehitriny an'ny Apple dia toa nanjary mpilalao haino aman-jery maro kokoa noho i Steve Jobs tenany, sainam-bolan'ny orinasa.
Ny iPhone 6c dia hitondra gamut miloko mitovy amin'ny iPod Touch
Ny tatitra farany avy ao amin'ny KGI dia manome soso-kevitra fa ny loko gamut an'ny iPhone 6c dia hitovy amin'ny an'ny taranaka farany an'ny iPod Touch.
BigBoss repo dia nohavaozina indray tamin'ny fiandohan'ny taona
Ny repo lehibe an'i Cydia, BigBoss dia namoaka endrika vaovao vao manomboka ny taona.
Apple dia handoa 318 tapitrisa euro handaminana ny fanalavirana ny hetra
Raha ny fantatra dia handoa 318 tapitrisa Euros ny an'ny Cupertino handaminana ny fifanolanana ataon'izy ireo amin'ny fandosirana hetra any Italia.
Fitbit no SmartWear nisafidy tamin'ity Noely ity
Ny fampiharana Fitbit ho an'ny iOS dia miakatra amin'ny fisintonana ambony indrindra mandritra ny andro krismasy, manaporofo ny fahombiazan'ny varotra.
Mankalaza ny Andro Boxing amin'ny alàlan'ny rakikira misy fihenam-bidy any UK sy Canada ny iTunes
Ny iTunes Store koa dia te hankalaza ny Andron'ny ady totohondry any UK sy Canada ary manao izany amin'ny fampidinana ny vidin'ny rakikira sasany.
Voasambotry ny polisy ireo iPhone 740 novidina tamin'ny alàlan'ny paikady fanaovana hosoka amin'ny carte de crédit.
Ny ekipa iPhone Actualidad dia mirary anao MERRY CHRISTMAS anao
Amin'izao andro izao, rehefa mianakavy daholo isika rehetra, ny fianakaviana izay ao anatin'ny Actualidad iPhone dia maniry ny hanao Krismasy sambatra ho antsika rehetra.
Netflix dia hampitombo ny famoretana ireo horonantsary ao amin'ny 1080p
Ny sehatra Netflix dia miasa mba hampitomboana ny famoretana ny atiny 1080p nefa tsy hanimba ny kalitaon'ny sary.
Ary farany, notapahan'ny fitsarana ny fitoriana an'i Apple noho ireo hafatra izay tsy nahatratra ny fitaovana Android rehefa nanova sehatra.
Google dia miasa amin'ny rindrambaiko fandefasan-kafatra maranitra hifaninana amin'ny Facebook Messenger
Araka ny The Wall Street Journal, Google dia miasa mba handefa fampiharana fandefasan-kafatra marani-tsaina hifaninana amin'ny Facebook Messenger.
Ampiasao ny iPhone misy fonon-tànana misy kalitao sy kanto noho ny Mujjo
Mujjo dia manome modely amin'ny fonon-tànana samihafa ho an'ny iPhone, vita amin'ny volon'ondry na hoditra, ary samy manana ny famaranana sy ny endriny tena tsara.
Apple dia miasa amin'ny endrika feo avo lenta
Tsy vao sambany namaky ireo tsaho ireo isika fa, indray mandeha ihany, dia voalaza fa miasa i Apple hamolavola endrika endrika feo avo lenta.
Efa fantatsika ny antony mahatonga ny fakantsary iPhone tsara dia tsara: manam-pahaizana 800 no miasa irery ho azy
Efa nanontany tena ve ianao hoe maninona no tsara be ilay fakantsary iPhone? Angamba noho ny fisian'ny spesialista 800 miasa ho azy irery.
Apple dia miatrika fitoriana hafa, amin'ity indray mitoraka ity noho ny fanjifana angon-drakitra be loatra amin'ny iPhone 5 / 5s
Apple tsy handresy ho an'ny mpisolovava. Ny fitoriana farany dia ny fitoriana satria misy iPhone 5s sasany mety handany data be loatra.
Phil Schiller dia mandray ny App Store. Jeff Williams, COO vaovao an'i Apple
Misy ny hetsika eo amin'ireo talen'ny Cupertino. Ny lohan'ny marketing an'ny orinasa dia miandraikitra ny App Store ihany koa.
Apple dia hijanona mifandray amin'i Samsung. Ny antony: aseho ny OLED
Betsaka ny tsaho milaza fa te hampihena (ary hanapaka mihitsy aza) ny fifandraisany amin'i Samsung i Apple. Betsaka koa ny ...
GeoHot ilay «legend Jailbreak» dia efa manana ny fiarany mizaka tena
Ny hacker malaza amin'ny PlayStation 3 sy iPhone Geohot dia nanova ny fiarany ho fiara mizaka tena avy amin'ny garazy an-tranony.
Ny fangatahana fikarohana Bing ho an'ny iOS dia nahazo vaovao mahaliana toy ny scanner barcode sy ny fampidirana an'i Uber.
Apple sy IBM dia efa namorona fampiharana matihanina maherin'ny 100
Ny fiaraha-miasa eo amin'ireo anarana lehibe roa amin'ny haitao mpanjifa dia efa nahitam-bokatra tamin'ny fampiharana zato mahery.
Craig Federighi dia miresaka momba ny fanokafana an'i Swift
Tamin'ny 3 Desambra, Apple nanatanteraka ny fampanantenany ary nanao Swift, ny fandaharany fandaharana, Open Source. Fotoana kely…
Manokatra zavamaniry miafina i Apple mba hanaovana fampisehoana manify sy mahomby kokoa
Nanokatra zavamaniry miafina any Taiwan i Apple mba hamoronana fampisehoana maivana kokoa sy mahia ary mahomby kokoa. Miomana amin'ny OLED?
Seho Siri izay mety tsy fantatrao
Siri dia nivoatra be rehefa nandeha ny fotoana, izany no antony itondranay anao ireo fampiasa Siri lehibe izay hamonjy fotoana be dia be anao.
Twitter izao dia manohana ny 1Password
Farany ny fampiharana Twitter ofisialy dia mifanaraka amin'ny 1Password
Ny karoka Google dia nohavaozina amin'ny endrika vaovao maro
Ny fampiharana Google ho an'ny iOS dia nohavaozina mba handraisana ny vaovao iOS 9 sy 3D Touch.
Apple dia manavao ny tranokalan'ny Apple ID miaraka amina endrika madio kokoa
Apple dia nanavao ny tranokala Apple ID ary izao dia manana endrika tsy madio sy tsy matotra kokoa noho ny teo aloha, zavatra ankasitrahana.
Asus sy LG maneso ny Smart Battery Case
Ny doka farany nataon'ny Asus sy LG dia mifantoka amin'ny fanesoana momba ny Smart Battery Case an'i Apple.
Fampiharana 2600 izao no mifanaraka amin'ny Apple TV vaovao
Hatramin'izao, efa misy mihoatra ny 2600 ny rindranasa mifanaraka amin'ny Apple TV vaovao
Ny tsaho milaza fa hahazo an'i GoPro i Apple dia mampisondrotra ny anjarany
Ny mpandalina vao haingana dia nitatitra fa afaka mahazo GoPro Apple mandefa fizarana amin'ny 16% faharoa.
Apple patanty dia mamaritra rafitra iray izay manamboatra tena ny seranana mando
Ny patanty Apple dia mamaritra ny rafitra iray izay afaka manamboatra seranan-tsambo izay nanjary mando taorian'ny fiparitahan'ny rano.
Apple dia mety miasa amin'ny iPhone GPU azy manokana
Fantatsika rehetra ny momba ny processeur A-series an'ny Apple, fa ahoana kosa raha niasa tamin'ny GPU-n'izy ireo ireo Cupertino?
Netflix, fijerena ny fipoahana sy ny fampiharana
Fanadihadiana momba an'i Netflix, ilay mpitarika tsy voadinika ao amin'ny sehatry ny streaming video
Aorian'ny scandals NSA dia azonao atao ny mamafa ny kaontinao Instagram. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia atoro anao ny fomba fanafoanana ny kaontinao.
Nanaiky handoa 548 tapitrisa dolara amin'i Apple i Samsung noho ny fitoriana momba ny patanty
Toa hifarana ity, satria nanaiky ny handoa $ 548 tapitrisa amin'i Apple i Samsung noho ny fifanolanana momba ny patanty.
Apple dia manampy karatra fanomezana $ 60 an'ny iTunes ho an'ny vokatra Beats sasany
Tsy dia fantatra loatra ny antony, fa Apple dia mampiditra karatra fanomezana iTunes $ 60 amin'ny vokatra Beats sasany.
Tsy ho an'ny olo-malaza intsony ny seho horonantsary mivantana an'ny Facebook
Hatramin'izao dia olo-malaza ihany no afaka mampiasa ny seho horonantsary mivantana an'ny Facebook, saingy androany dia nanambara izy ireo fa betsaka ny mpampiasa afaka mampiasa azy.
Apple dia mety miasa amin'ny mpanonta printy loko 3D azy manokana
Araka ny patanty iray navoaka vao haingana, Apple dia mety miasa amin'ny mpanonta printy miloko 3D azy manokana. Ho hitantsika ve izany?
Apple dia mamafa ny lisitra faniriana avy amin'ny App Store ho an'ny mpampiasa maro
Toa voafafa ilay lisitra faniriana ao amin'ny App Store, namela ireo mpampiasa sasany tsy nanana ireo lisitra nosoratany.
Nanjary loharano misokatra ny fiteny fandaharana haingana
Araka ny nampanantenaina tao amin'ny WWDC 2014, ny fiteny fandaharana Apple Swift dia nanjary loharano misokatra ary azo alaina avy amin'ny Swift.org
Samsung mametaka iPod amin'ny iray amin'ireo patanty
Samsung dia nanamboatra patanty mahaliana izay ahitantsika ny sary famantarana ilay Apple iPod malaza nalaina sary.
Ny WhatsApp dia manakana ny rohy Telegram amin'ny fampiharana anao
WhatsApp dia nanomboka nanakana ny rohy izay mandefa amin'ny atiny mifandraika amin'ny iray amin'ireo mpifaninana lehibe aminy, ny fampiharana fandefasana hafatra Telegram.
Eddy Cue dia manazava ny antony nametrahana ny app News ho default
Eddy Cue dia manazava ny antony nanapahan'izy ireo hevitra ny hamela ny fampiharana Apple News hametraka amin'ny toerana misy azy ao amin'ny iOS 9.
Izahay dia mitondra anao ho mpitari-dalana amin'ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny mpankafy an'i Apple, ny geekan'ny teknolojia indrindra ary koa ny science fiction, ny tolotra tsara indrindra.
Tsy gaga izahay, indrindra any Etazonia, fa ny vokatra malaza indrindra amin'ny Black Friday 2015 dia ireo avy any Apple.
Ianaro izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny fifandraisana Internet anao ary apetraho mifanaraka amin'ny iPhone, Mac ary ny fitaovana hafa ny fifandraisanao an-trano.
Fikorontanana any Aostralia momba ny Apple Pay sy ny fandavana ny banky
Ny mpanao politika aostralianina dia mitaky ny hanokafana fanadihadiana momba ny ankivy amin'ny banky aostraliana mankany Apple Pay.
Appel dia mandinika fatratra ny fanesorana ny mpampitohy jack amin'ny iPhone 7 amin'ny fikasana hanao ny smartphone finday manify indrindra eny an-tsena.
Amin'ny ho avy dia afaka mampiasa ny iPhone isika na dia misy fonon-tànana aza
Ny patanty vaovao dia mamaritra rafitra iray ahafahantsika mampiasa iPhone, iPod na iPad na dia misy fonon-tànana aza eny an-tanantsika.
Ny smartwatch voalohany an'ny Fossil, Q Founder, amidy ankehitriny
Azontsika atao izao ny mividy ny Fossil Q Founder, ny smartwatch voalohany an'ny orinasan'ny fiambenana Soisa
SEGA dia tsy manadino ny fotoana voatondro ary mandefa Football Manager Mobile 2016
SEGA dia manana lalan-drà isan-taona amin'ny tsimbadika vaovao an'ny simulator Football Manager malaza, ary ...
Ny bokin'i Steve Jobs, ny tantaram-piainany araka ny nilazana azy
Ny bokin'i Steve Jobs dia boky iray milaza ny tantaram-piainany manasongadina ny tsara sy ny ratsy amin'ny fahaiza-manao.
Tonga amin'ny iOS avy amin'ny Android Wear ve ny valiny?
Taorian'ny fahaizana mamaly ny fampandrenesana amin'ny iOS avy amin'ny famantaranandro Pebble, dia toa hahatratra ny Android Wear io fahafaha-manao io.
Ny fampisehoana OLED dia ho tonga amin'ny iPhone amin'ny taona 2018
Ny teknolojia OLED dia mety hahatratra ny efijery iPhone hatramin'ny taona 2018 amin'ny alàlan'ny LG Display.
Te hiasa ao amin'ny Apple ve ianao? Jereo izay mety hanontaniany anao
Mandrosoa ary tadiavo ny sasany amin'ireo fanontaniana hafahafa mety hapetrakao amin'ny tenanao raha te hiasa amin'ny Apple amin'ny toerana manan-danja ianao.
Efa nahita ny atody Paska an'ny Google tamin'ny Star Wars ve ianao?
Efa hitanao ve ny atody Paska navoakan'i Google momba ny Star Wars? Andramo izany. Mila manao ny fikarohana marina ao amin'ny motera fikarohana ianao.
Google Drive dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny 3D Touch sy maro hafa
Ny fanavaozana ny Google Drive farany dia mitondra fanampiana ho an'ny fampiasa 3D Touch ary miharo tanteraka amin'ny iOS 9.
Ny rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra SNAPCHAT dia mitondra antsika endrika vaovao antsoina hoe Story Explorer izay manome antsika fahitana maro amin'ny hetsika iray.
WhatsApp dia hamela amin'ny fanavaozana manaraka ny mety hisakanana ireo mpampiasa manokana ny resaka anaty vondrona.
Apple dia manaparitaka rafitra iray misy zoro azo esorina mba hiarovana ny iPhone
Apple dia nanome patanty rafitra fiarovana toy ny bumper miaraka amin'ny zoro azo esorina mba hiarovana ny iPhone amin'ny rano mitete.
Lehilahy iray mandeha mitondra sabatra ao anaty Apple Store
Lehilahy iray "nandeha" nitondra sabatra samurai tao amin'ny Apple Store, tao amin'ny Fifth Avenue, New York.
Vibbo no valin'i Segundamano amin'i Wallapop
Segundamano dia mivadika ho Vibbo hifanaraka amin'ny fotoana vaovao
Tsy maty ny jailbreak, ho ela velona anie ny jailbreak
Betsaka ny feo milaza mialoha fa ho faty tsy ho ela ny jailbreak, na izany aza, toy ny isan-taona dia manana ho avy mamiratra ny jailbreak.
Ny Beats Solo 2 sy urBeats dia tonga amin'ny loko Rose Gold
Ahoana no hatao raha tsy aorian'ny Apple Watch Sport sy ny iPhone 6s, ankehitriny ny Beats Solo 2 sy urBeats dia tonga amin'ny loko iray ihany.
Rafitra patanty Apple hifehezana ny fampandrenesana amin'ny maso
Apple dia nanao patanty tamin'ny rafitra iray izay ahafahan'ny mpampiasa mifehy ny fampandrenesana amin'ny alàlan'ny fihetsika ataon'ny maso.
Apple dia niatrika fitoriana vaovao ary ny mpisolovava iray avy any Shina no nitory azy ireo noho ny filazany fa ny hany zavatra miova dia ny zava-drehetra, rehefa tsy marina izany.
Ny fampiharana fandefasan-kafatra WhatsApp dia havaozina miaraka amin'ny topi-maso ny rohy, menio fanovana vaovao ary vaovao maro hafa.
Arovy ny iPhone fa tsy voamarika zara raha amin'ny Just Mobile TENC sy AutoHeal
Nodinihinay ny mpiaro ny efijery AutoHeal sy ny tranga TENC avy amin'ny Justo Mobile, fiarovana misy fiatraikany kely amin'ny fahitana.
Apple manatsara ny iTunes Connect ao anatin'izany ny fahaizana mitantana kaonty marobe
Apple dia nanatsara ny fifandraisana iTunes mba hanohana kaonty marobe ary sokajy orinasa vaovao no nampiana.
Ny kinova Bluetooth manaraka dia hanatsara ny elanelam-potoana hatramin'ny inefatra ary hampitombo ny hafainganan'ny fampitana hatramin'ny avo roa heny amin'ny ankehitriny.
Manery ny f.lux hiala amin'ny tranokalany i Apple
Apple dia nifandray tamin'ny ekipa f.lux hampitsahatra ny fametrahana amin'ny iOS 9 tsy misy Jai